नेपालको नाम विश्व सामु चम्काएका विश्व च्याम्पियन कार्की काडमाडौँ आउदै गर्दा बाटोमै अस्ताएको त्यो अन्तिम पल ! – Namaste Host
March 16, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नेपालको नाम विश्व सामु चम्काएका विश्व च्याम्पियन कार्की काडमाडौँ आउदै गर्दा बाटोमै अस्ताएको त्यो अन्तिम पल !
भारत्तोलनका स्वर्णपदक बिजेता रुप कार्कीको निधन भएको करिब २ महिना भएको छ । नेपालको रुपन्देही स्थायी घर भएका कार्कीको बुटवलबाट काठमाण्डौ उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बीच बाटोमै निधन भएको हो । बुटवलमा उपचार असम्भव भएपछि काठमाण्डौ ल्याउँदै गर्दा बीच बाटोमा निधन भएको श्रोतले बताएको थियो । ***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
कार्की शरीर बनाउन कुनै औ’ष’धि’को से’वन नगरेका समूहमा प्रतियोगितामा भाग लिने भारत्तोलक खेलाडी हुन् । कार्कीले एटलान्टा आईपीएल, इन्टरनेसनल पावर लिफ्टइङ्ग प्रतियोगिता (अन्तर्राष्ट्रिय भारत्तोलन प्रतियोगितामा) आफ्नो तौल समूहमा स्वर्ण जिती नेपालको नाम बिश्वमा पुराउन सफल भएका थिए । उनले कुल १४ सय पाउण्ड उठाइ उनले स्वर्णपदक प्राप्त गरेका थिए । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
भारत्तोलन खेलकै लागि दैनिक ३ देखि ५ घण्टा सम्म नियमित ब्यायाम गर्ने कार्कीले भनेका थिए, ‘म मेरो लागि नभएर नेपाल र नेपालीको पहिचानका लागि खेलिरहेको छु। खेलको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाउन पाएकोमा निकै गर्व लागेको छ।’ अभियानमा जीवन संगिनी शोभा सुबेदी र छोरा रुपेशको साथ र हौसलाले सफलता चुम्न सफल भएको उनले बताएका थिए। ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***